Fampidirana | Outboard Boat Motor Repair
Tsaroako tsara fa nihalehibe aho tamin'ny taona 1960 nandany andro fahavaratra nanjono tamin'ny raibeko tany atsimon'i Indiana. Ny raibeko izay mpitrandraka arintany ao Kentucky ary avy eo nisotro ronono tao amin'ny Chrysler Motor Corporation amin'ny maha mpiasa mpiasa azy dia noheverin'ny maro ho manan-talenta mekanika. Izy koa no mpanarato manidina tsara indrindra hitako. Ny raibeko dia nankafy ny lalitra fisotroan-dronono namatotra sy nitazona ny fitaovany manjono, anisan'izany ny motera sambony tamin'ny ririnina sy ny jono tamin'ny ankamaroan'ny andro nandritra ny fahavaratra. Ny raibeko dia nanamboatra motera kely tao amin'ny garazy tokana nataony nandritra ny fahavaratra. Tonga avy amin'ny faritra manodidina ny olona mba hametahana ireo mpanao milomano. Heveriko fa noho ny fitiavany manao «tinkering» no nanaovany azy indrindra satria tsy nandoa vola be tamin'ny asany izy. Tadidiko fa nanampy azy aho ny maraina sy ny tolak'andro niasa tamin'ny bozaka bozaka, fanapahana ahitra, mikarakara ny zaridaina, na zavatra hafa ilaina hatao mba hahafahany malalaka hanjono amin'ny tolakandro. Tamin'ny fisotroan-dronono dia nividy johnboat aluminium 16 metatra sy motera vaovao Evinrude 3 hp Lightwin izay ny raibeko, izay tonga lafatra tokoa hoentina any amin'ny lavaka famonosana ary manarato manidina eny amoron-drano. Ny fahatsiarovako ny sambo sy ny motera voalohany indrindra dia tamin'ny andro ankehitriny. Gaga foana aho fa mora ny nanombohan'ny motera sy ny fomba nihazakazak'izy ireo. Izy koa dia nanana milina fanenjehana Lawn Boy izay nanomboka isaky ny nisintona voalohany ary io no fanapahana tsara indrindra nampiasako hatrizay. Tsapako izao fa ny motera Evinrude sambo sy ny motera fanapahana bozaka dia noforonin'ny Outboard Marine Corporation iray ihany ary samy motera mivezivezy roa misy faritra maro azo takalo.
Lehiben'ny talenta ny raibeko. Tsy lehilahy nanan-karena izy fa nifankahazo tsara ary nanana talenta ary nahavita zavatra maro. Nanamboatra sambo mpanjono kely maromaro tamin'ny hazo izy. Mpandrafitra mahay izy ary nanorina trano maromaro. Izy mihitsy aza no namolavola sy nanamboatra tobim-pivoahana tampoka talohan'ny nandrenesan'ny olona ny zavatra toy izany. Namatotra ny lalitra popper bosoa izy ary namelona anay rehetra hanjono. Tena nankasitraka ireo zavatra noforonina nanatsara ny fiainany izy. Gaga izy tamin'ny lanternan'i Colman sy ny fatana ampiasainy hitobiana. Izy dia nanana motera trolling elektrika Silvertrol izay mangina manokana amin'ny jono eny amoron-drano. Ny sambo alim-bolony vaovao dia somary maivana ho an'ny lehilahy iray hikirakira ny famoahana sy ny famoahana ireo entana avy eo ambonin'ireo fitoerany fanjonoana. Ary nireharehany ny familiana manidina mandeha ho azy an'ny Ocean City # 90 satria nandany ny ankamaroan'ny fotoanany tamin'ny fametahana tehina manidina tamin'ny tànana iray sy ny familiana maotera iray hafa. Nahatsapa izy fa Andriamatoa Coleman dia nanao cooler tsara izay nitandrina ny fisotroanay tamin'ny andro fahavaratra mafana, ary Andriamatoa Evinrude dia nanao maotera sambo Lightwin 3-hp mahafinaritra izay mora entina sy miakatra amin'ny sambony.
Ankehitriny 50 taona aho izao, mankasitraka ireo andro tsara nahalehibe ahy. Mbola mandany fotoana amin'ny fomban-drazana ny jono manidina miaraka amin'ny raiko sy ny zanako aho. Ny fitaovana ananantsika ankehitriny dia vaovao kokoa, mandroso kokoa, lehibe kokoa ary lafo indrindra. Soa ihany aho fa nanana sy nanao zavatra tsy zakan'ny raibeko, fa misy zavatra tsy ampy. Maka ny zanako vavy sy ny zanako lahy aho manjono, ary toy ny ankizy rehetra manana fotoana mety, samy tia mitondra sambo daholo izy ireo. Na izany na tsy izany dia tsy mahazo traikefa mitovy amin'ny maotera avo lenta, teknolojia avo lenta, maotera efatra misy ahy amin'ny sambon-jono aho anio. Izaho sy ny zanako lahy dia niaraka tamin'ny skoto zazalahy ary mpanolotsaina ny marika momba ny siansa momba ny tontolo iainana aho. Ny iray amin'ireo farihy izay tiako halaina ho an'ny skotista dia misy fetra 10 hp ka hitako fa mila motera kely aho. Ny namako iray nahatsapa izay tiako hatao amin'ireo skotisma dia nanome ahy motera kely roa izay nolazainy fa antitra loatra izy ka tsy afaka nisintona ny tady hanombohany. Ireto motera ireto dia Evinrude 1963 HP Lightwin tamin'ny 3 izay raiki-pitia tamiko avy hatrany satria toy ny ahatsiarovako ny raibeko, sy Johnson 1958 HP HP 5.5ah Seahorse tamin'ny 1996. Fantatro fa motera mahazatra ireo. Ireo motera ireo miaraka amina Johnson Johnson 15 hp XNUMX izay nipetrahako manodidina, lafo loatra ka tsy namboarina, dia nanome ahy ny fanamby nilaiko tamin'ny tetikasa ririnina tsara.
Ny raibeko dia nilaza tamiko foana, ary tadidiko tsara, fa "Raha resaka motera raha toa ka tafangona sy alamina tsara ny zava-drehetra dia handeha tsara izany." "Raha tsy manomboka na mandeha tsara izy io dia misy olana tsy maintsy hitanao sy amboarinao na alaminao." Iray amin'ireo fahamarinana marobe amin'ny fiainana nampianariny ahy io. Spark, solika ary famatrarana no zavatra telo lehibe takiana mba hampandehanana fiara.
Ny antenaiko dia ny handrakitra an-tsoratra ny feon'ireto motera ireto amin'ny alàlan'ny fandefasana sary sy fanazavana amin'ity tranokala ity amin'izay mety ho loharanom-pahalalana ho an'izay manana motera mitovy amin'izany izay mila fanamboarana kely na fanitsiana. Hataoko lisitra ireo faritra manokana sy ny nomeraon'ny katalaogy izay ampiasaiko ary holazaiko aminao tsara izay ilainao. Manantena aho fa hanao ireo tetik'asa mirindra ireo amin'ny alàlan'ny fitaovana tsotra sy ny boky fanamboarana fotsiny. Mety manana ny iray amin'ireo maotera ivelany Evinrude na Johnson any ivelany ianao izay nolovanao na azonao. Mety hihazakazaka na tsia fa azo atao ny mihazakazaka tsara miaraka amina tonony tanteraka. Azonao atao ny mahazo ny ampahany ilainao amin'ny motera taloha amin'ny alàlan'ny e-Bay na amin'ny Internet amin'ny ankapobeny. Manana rohy ahafahanao mividy ny ampahany betsaka amin'ny Amazon.com izahay. Amin'ny alàlan'ny fampiasana Amazon, dia mahazo komisiona kely izahay izay manampy amin'ny famatsiam-bola ity tranonkala ity sy ireo tetik'asa ho avy. Raha manana sambo taloha ianao dia mila manamboatra azy alohan'ny hametrahana azy amin'ny farihy ary manantena azy hirehitra sy hihazakazaka. Raha tsy misy fanaraha-maso tsara dia mety hanimba ny fitsangatsanganana tsara ianao ary ho diso fanantenana. Ny ampahany fotsiny dia mila $ 100 amin'ny ampahany ary ny asa voatokana sasany mba hampandehanana maotera sambo kely ivelany toy ny tamin'ny fotoany vaovao. Fantatro fa ny faritra sasany amin'ireto motera ireto dia mila soloina, na dia voatahiry tsara aza ny motera fa efa ela. Ny sasany amin'ireo faritra fanoloana dia ambony lavitra noho ireo faritra tany am-boalohany ka ny fanoloana azy ireo dia hanampy ny motera anao. Ny faniriako dia tsy ny hamerina ireo motera ireo amin'ny toe-javatra asehon'izy ireo, fa kosa hiafara amin'ny zavatra azoko atao amin'ny taona maro. Misy ny olona manodidina izay manamboatra motera sambo tranainy ka asehoy azy ireo avy eo ary amidy.
Mety handoa vola be ny fametrahana ireo motera ireo amina magazay mpivarotra sambo. Notantarain'ny toerana roa aho fa tsy mendrika amboarina ireo motera taloha ary liana kokoa amin'ny fivarotana motera vaovao ho ahy izy ireo. Ny toerana hafa dia hilaza aminao fa tsy mandeha amin'ny motera efa mihoatra ny 10 na 20 taona izy ireo. Raha ny tena izy dia mora ampiasaina ireto motera ireto ary izay manana fotoana, faharetana ary fahaizana mekanika faran'izay kely dia mety ho voahaja sy mandeha tsara nefa tsy dia mandany vola. Raha vantany vao vitanao ny iray amin'ireo tetik'asa ireo ary alefanao voalohany, dia hanana fahafaham-po be ianao amin'ny fahafantarana fa nampandeha tsara ny maotera Evinrude na Johnson boatinao taloha.
Please KITIHO ETO hamaky momba ny zavatra ilainao eo anoloanao manomboka ny tetikasa.